Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Iqhaza Lokushintsha Kwesimo Sezulu Manje Ekwenyuseni Izilinganiso Zokungezwani Nomzimba
Ukubuyekezwa kwakamuva kugqamisa umnikelo wokusebenzisana wokushintsha kwesimo sezulu kanye nokungcoliswa komoya ezifweni zokuphefumula ezingezwani nomzimba.
Ukushintsha kwesimo sezulu, okubonakala emazingeni okushisa akhuphukayo, ukungcola okukhubaza, izikhukhula ezibhubhisayo, nesomiso esinamandla, kuthinta izigidi zabantu emhlabeni wonke. Ukwenyuka kwamazinga okungezwani nokuphefumula okuxhumene nokungcola okufana nesifuba somoya, i-rhinitis, ne-hay fever eminyakeni yamuva nje kungase kubalwe ngokwengxenye emiphumeleni yokushintsha kwesimo sezulu. Kodwa-ke, nakuba imiphumela ngayinye yokukhuphuka kwamazinga okushisa nokungcoliswa komoya kulezi zifo ezingezwani nomzimba iye yacutshungulwa, ukubukezwa okuphelele kokuthi lezi zici zithintana kanjani bekungakatholakali kuze kube manje.
Esibuyekezweni esishicilelwe ku-Chinese Medical Journal ngomhlaka-5 Julayi 2020, abacwaningi bafingqe ubunkimbinkimbi bendlela ukuguquka kwesimo sezulu, ukungcoliswa komoya, kanye nokungezwani komoya okufana nempova kanye nezinhlamvu ezifaka isandla ezifweni zokuphefumula. Baxoxa ngokuthi ukushintsha kwesimo sezulu, okuhlanganisa nezinga lokushisa elidlulele, kungawuthinta kanjani umgudu wokuphefumula futhi kubangele izifo ezibangelwa ukungezwani komzimba nezinto ezithile. Ukwengeza, baphinde bagqamise indima yezinhlekelele zemvelo njengokuduma kwezulu, izikhukhula, imililo yequbula, nezivunguvungu zothuli ekwandiseni ukukhiqizwa nokusatshalaliswa kwezinto ezingezwani nomoya kanye nokunciphisa izinga lomoya, ngaleyo ndlela kuthinte kabi impilo yabantu. Isifinyezo se-athikili sivezwa kuvidiyo ku-YouTube.
Sekukonke, isibuyekezo sixwayisa ngezingcuphe zezempilo ezingaba ezinkulu kakhulu esikhathini esizayo ngenxa yemiphumela ephindaphindayo yokushisa nezifo ezithwalwa emoyeni ekungcoleni komoya. "Ukulinganisa kwethu kubonisa ukuthi amazinga e-particle matter kanye ne-ozone emoyeni azokhula ngokufudumala kwesimo sezulu, futhi amazinga okushisa akhuphukayo kanye namazinga e-CO2 angase akhuphule amazinga ezinto ezibangelwa umoya, okwandisa ingozi yezifo zokuphefumula ezibangelwa yi-allergic," kusho uProf. Cun-Rui Huang, owayehola lolu cwaningo.
Ndawonye, ​​lo mbiko usebenza njengokubizelwa esenzweni kocwaningo, ukuthuthukiswa, kanye nemizamo yokukhuthaza evela kochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo, obeka isisekelo samasu ezempilo yomphakathi asebenza kangcono. “Izindlela ezilula zokuhlela izindawo zasemadolobheni njengokwenza izindawo ezivimbela ukungcoliswa komoya ophansi ezizungeze izindawo zokuhlala, ukutshala izitshalo ezingezona izinto ezingezwani nomzimba, kanye nothango lokuthena ngaphambi kokuqhakaza kunganciphisa ukuchayeka okunobuthi futhi kunciphise izingozi zezempilo. Ukuqapha isimo sezulu kanye nezinhlelo zokuxwayisa kungasiza iziphathimandla ukuthi zivikele abantu abasengozini njengezakhamuzi zasemadolobheni kanye nezingane ezifweni ezinjalo, "kuchaza uProf. Huang, enezela ukuthi lezo zindlela zizobaluleka ekwehliseni umthelela wezempilo wezifo ezithinta ukuphefumula okuphefumulayo esikhathini esizayo.
Ngempela, kudingeka umzamo ohlangene ukuze kugcinwe ilungelo lomuntu ngamunye lokuhogela umoya ohlanzekile.
I-Global Solar Micro Inverter Market Inweba Nge-16.6%...